:: My Little World ::: တရုတ်နှစ်ကူးပိတ်ရက်မှာ....
Posted by Nay Nay Naing at 1/25/2009 07:45:00 PM
N2 အစ်မ အိမ်ကိုတော့ မမျော်နဲ့ ။ အစ်မကိုယ်တိုင်လည်း ရှိတာလေး…စားပြီး နေတယ်။ but ဒါလောက်နဲ့တော့ ဝမယ် မထင်ဘူး ကလေးမရယ်။ တို့ အတွက် တော့ အဲဒါ snack ဘဲ ဖြစ်ပါတယ။်
Sunday, January 25, 2009 10:19:00 PM
စင်စင် ဒီလို ခွဲခြားခွဲခြား လုပ်တာတော့ မကောင်းပါဘူး. တို့လဲ...အဲလိုဘဲ ဥစ္စာ
အစ်မ ခင်ဦးမေစီက မမျှော်ဘူး။ စားစရာ မရှိဘူးဆိုတာတော့ မယုံဘူး။ ဒီမှာက ရှိတဲ့ စားစရာ အကုန် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြထားတာနော်။ အစ်မလည်း အဲလို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြ။
စင်ဒဏ်လာ သဘောကောင်း၊ မနောဖြူဆိုတာ အရင်ထဲက သိပြီးသားပါ။ :D..
ခုလို ဖိတ်ခေါ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လာစားရမှာ အားနာ စရာကြီး။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က တချို့First Food ဆိုင်တွေဖွင့်တယ်ပြောတယ်။ အဆင်ပြေမှာပါ။
Sunday, January 25, 2009 10:42:00 PM
ခွဲခြားခွဲခြား လုပ်ပါဘူး မမရဲ့..
ဆင်ဆင်.. တို့ရော မပါဘူးလားကွယ်...။ ခွဲခြားခွဲခြား မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်...။
နေနေရေ အမြဲ အများကြီး စားနေတာ ဒီ ၂ရက်လောက်နဲ့တော့ နေနိုင်မှာပါ။ COKE တွေတော့ သိပ်မသောက်နဲ့ ၀လာလိမ့်မယ်။ မလေးဆိုင် ကုလားဆိုင်တွေ မဖွင့်ဘူးလား။
နင်က အခုအချိန်ထိ အိပ်နေတော့ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူက ထမင်းလာစားပါလို့ ဖုန်းဆက်ရင်တောင် နင်သိမှာမဟုတ်ဘူး။
Monday, January 26, 2009 10:17:00 AM
မစင်ဒါလား အကျွန်ုပ်လဲ အစားအသောက် အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ် အသင်ချက်ပြီးလျှင် အကျွန်ုပ်အား သံချောင်းခေါက်ပေးပါ
Tuesday, January 27, 2009 1:34:00 AM
27 Jan 09, 05:36 PM
kom: ထမင်းအိုးကလေးတည်။။ ဘာရှိသလဲရှာဖွေ။
ဘဲဥကြောမယ်။ လက်ဘက်သုတ်. ဝက်အူချောင်ကြော်. စမူဆာကြော် (NTUC မှ)
ခေါက်ဆွဲပြူတ်စားပြီး အားတွေ ရှိလြာ့ပီ.သဘော်သီးဆက်စားလိုက်ဦးမယ်။ N2 ရော စားစရာမှ ရှိရဲ့လားမသိ
Tuesday, January 27, 2009 8:16:00 PM
ဒီရက်ပိုင်း ခေါင်းကိုက်နေတာများလို့အိပ်နေတာများတယ်။ ဒီမှာ ဟိုရေးဒီရေး လုပ်မယ် စိတ်ကူးပေမယ့် မရေးနိုင်ဘူး။ စားစရာရှိပါ့မလားလို့စိုးရိမ်နေတဲ့ အစ်မခင်ဦးမေကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ ခေါက်ဆွဲပြုတ် မစားတတ်ဘူး။ မကြိုက်ဘူး။ လက်ဖက်သုတ်၊ ဘဲဥကြော် နဲ့ထမင်းတော့ စားချင်တယ်။
ဒီရက်မှာ ၃ ခါတော့ စားဖြစ်တယ်။ မြနန္ဒာနဲ့အင်းလေး မြန်မာ ထမင်းဆိုင်က အစားအသောက်တွေနဲ့KFC က ကြက်ကြော် စားတယ်။ မြနန္ဒာက အစားအသောက်ကို မကြိုက်တော့ တစ်ဝက်လောက်ပဲ စားဝင်တယ်။ မကြိုက်ရင် စားလို့ မရတဲ့ အကျင့်ကို ပြင်ရအုံးမယ်။ အရင် ၃-၄ နှစ်က နဲ့မတူတော့ဘူး။ အသက်ပဲကြီးလားလို့ လား၊ လူက ခံနိုင်ရည် အားနည်းလာလို့ လား မသိဘူး ခုနောက်ပိုင်း အစာမစားရင် သိပ်သိသာတယ်။ မူးနေရော ( ဒီနေရာမှာ မသောက်ပဲ မူးနေတယ်ဆိုပြီး အားကျနေမယ့် သူတွေရှိနိုင်တယ်။ )
ဟင်းချက်ကျွေးမယ် လာစားဆိုပြီး ဖိတ်ခေါ်တဲ့ သူငယ်ချင်း စိုးမိုး ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တယ်။ သွားစားချင်ပေမယ့် နေသိပ်မကောင်းတာနဲ့ဝေးဝေးမသွားချင်လို့သွားမစားဖြစ်လိုက်ဘူး။ အိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်း မစားရတာ အတော်ကြာပြီ။ နီးတယ်ဆို သွားစားဖြစ်မှာ။ နောက်ပိုင်း စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နေတဲ့ နေရာတွေ နဲ့နီးနီးနားနားနေမှာ သွားနေရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားနေရပြီ။
စားပါ..စားပါ..လူလေးသေးသလောက် အတော်စားနိုင်တဲ့ကလေးမ.. စားနိုင်တယ် ဆိုတာ အများကြီးစားတာ ကိုပြောတာ မဟုတ်ဘူး.အစုံ စားနေတာ ကိုပြောတာ..
Thursday, January 29, 2009 11:03:00 PM